४ घण्टासम्म कुरा गरिन् अनि दिइन् माफी – Wow Sansar
४ घण्टासम्म कुरा गरिन् अनि दिइन् माफी
February 9, 2021 121
काठमाडौं। करणीको शि’का र भएकी २५ वर्षकी एक युवतीले आफूलाई क’र णी गर्ने व्यक्तिलाई माफी दिएर अहिले पी’डि’तलाई सहयोग गरिरहेकी छिन् । क्यानडाको ओ’न्टारियोकी मार्ली लिसका अनुसार उनी अ’प राधी’लाई सजाय दिलाउने भन्दा पी’डि’तको घा’उ नि’को पार्ने र उनीहरुलाई नयाँ जीवन जिउन सघाउने कुरामा जोड दिन्छिन् ।
स्थानीय मिडिया रिपोर्टअनुसार मार्लीले २०१९ मा आफूलाई क’रणी गर्ने व्यक्तिको करिब ४ घण्टा सामना गरेकी थिइन् । उनले त्यसलाई माफी दिएकी थिइन् । त्यहाँको नियमअनुसार यसरी माफी दिने प्रक्रियालाई ‘रेस्टो’रे’टि’भ ज’स्टि’स प्रो’से’स भनिन्छ ।
मार्लीले ती’तो अतित बिर्सिएर अगाडि बढ्नु जरुरी भएकोले उसलाई माफी दिएको बताएकी थिइन् । उनले त्यतिबेलादेखि नै यसको शि’का’र भएका महिलाहरुलाई सहयोग गर्दै आएकी छिन् । सीटिभीन्यूजसँग टेलिफोन कुराकानीमा उनले भनिन् ‘मैले अहिलेसम्म करिब ४० महिलाको साथमा काम गर्ने सौभाग्य पाएकी छु । महिलासँग हामीले उनीहरुको उपचार, ल’ज्जा बो’ध, आफ्नो श’रीरलाई माया गर्ने र पि’तृसत्ता’त्मक व्यवस्थालाई उजागर गर्नेजस्ता काम गर्छौं ।’
मार्लीले अदालतको प्रक्रिया उस्तै पी’डा’दा’यी हुने बताउँदै वकिलले दो’ षीको पक्षमा वकालत गर्दा आफूलाई पी’डित भएको महसुस हुने बताइन् । मार्लीका अनुसार उनी केवल यत्ति जान्न चाहन्थिन् कि ति ब्याक्तिले उनीसँग यस्तो किन गरे ? दो’ षीले अहिले के गरिरहेका छन् भन्ने जान्न पाउने अधिकार उनीसँग भएको भए पनि उनी यो जान्न चाहन्निन् । दो’ षीको बारेमा सोच्दा पुरानो घाउ ताजा हुने भएकोले आफूले जान्न नचाहेको उनले बताइन् ।
यो पनि पढ्नुहोस्, नेपाली बोल्ने अफ्रीकन गायिका, नेपाल मन पर्छ भन्दै केपी ओलीलाई यसो भनिन्
विदेशीले नेपाली बालिदिं’दा हामीलाई निकै नै खुशी लाग्छ । नेपाली बोल्ने र नेपाललाई मन पराए’र माया गर्ने धेरै विदेशीहरु छन् नेपालमा । तीनै मध्य’की एक हुन् विउन्सी पनि । उनी अफ्रिकन हुन् । लकडाउनको समयमा नेपालमै थुनिएकी वि’उन्सीले राम्ररी नेपाली बोल्न जन्दछिन् । नेपा’ली बोल्ने मात्र नभई उनले नेपाली लोक गीतहरुपनि उत्तिकै राम्रो लय र भाका’मा गाउन जान्दछिन् । उनको बोली र गीतले सबैलाई आर्कषित गदर्छ ।
लक’डानका कारण आफ्नो देश फर्कन नपाएकी विउन्सी’लाई नेपालको मायाले तानेको उनी बता’उँछिन् । उनी भन्छिन्,‘लकडाउनको स’मयमा म यता बस्न बाध्य भएँ । र यही लकडा’उनकै समयले मलाई नेपाल र नेपालीप्र’तिको मायामा अलझायो । मलाई नेपा’लीसंगै बिहे गर्न मन छ । मलाई नेपाली खाना मन पनि पर्छ ।’ नेपाल र नेपाली प्रतिको प्रेमलाई ब’ताउँदै विउन्सीले आफुलाई मन पर्ने लोक गीत पनि गाएर सुनाईन् । उनी नेपाली लोक गीत निकै नै राम्रो’संग गाउने रहेछिन् ।
विउन्सी’ले एउटा नेपाली फिल्म’कोलागी गीत पनि गाई सकेकी छन् । उनले द्धन्द्ध निर्देशक राजेन्द्र खडकीको फिल्म’कोलागी एउटा गीत गाएकी छन् । विउन्सी’ले नेपालका धेरै कुरा सिकी सकेकी छन् । विशेषगरी उनले नेपाली सबै प्रकारको संस्कृतिहरुलाई रुचाएको बताउँछिन् । विउन्सी’ले नेपालको राजनीतिलाई पनि नियालेको बता’उँदै उनले हाल नेपालको प्रधानमन्त्री केपी ओली भएको पनि बताईन् । उनले प्रधानमन्त्री केपी ओली’को नाम स्पष्ट रुपमा उच्चा’रण समेत गरिन् ।
Prevआखिर किन विवाहको केहि घण्टा पछि नै दुलहीले नदीमा हाम फालिन्? दुलहा किनारामा बसेर मात्र एकोहोरो हेरिरहे
Nextअन्तत बाहिरियो भागरथीको पोष्टमार्टम रिपोर्ट! के हाेला अब?
सवारी दुर्घटनामा प्रहरीको मृत्यु